ကဗျာ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 192
ကမာပုလဲ ဧပြီ ၂၁၊ ၂၀၁၃ ဘ၀မှာ … ကိုယ်က မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားခဲ့ပေမဲ့ စွန့်လွှတ်လမ်းခွဲလိုက်ရတဲ့ အတ္တတွေ …။ ၂၅ နှစ်ဟာ လူတယောက်ရဲ့ စိတ်ကူးစိတ်သန်းအပျက်အတိုင်း သူ့အလိုကျ လိုက်ပါစီးမျောရမယ်လား …။ ပုဂ္ဂလ ကိုးကွယ်ခြင်းတရားကို အိမ်ကထွက်လာကတည်းက အမေ့ မျက်ရည်စတွေနဲ့အတူ ထားရစ်ခဲ့ …။ အကြောက်တရားကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် ငွေကြောင့်ဖြစ်စေ ရင်ခုန်သံ မတူတော့တဲ့ တခါက ချစ်ခဲ့ရသူများ ဆန့်ကျင်ပြိုင်ဘက် အကျိုးစီးပွားတွေဖြစ် လမ်းခွဲရမယ့် အဖြစ်တွေက ဘ၀မှာ တပုံတပင် …။ ၂၅ နှစ်ဆိုတဲ့ ကျောပိုးအိတ်ထဲမှာ အရေးကြီးဆုံးက ကျဆုံးခဲ့ကြတဲ့ ချစ်သူအာဇာနည်တွေရဲ့ သစ္စာတရား တိုက်ပွဲဝင် အလံတလက် ကဲဗျာ လူမှာ ဒီထက် ဘာက တန်ဖိုးအရှိဆုံးလဲ …။ ၂၅...
လေးစားပါရစေ နိုင်ဦးညို (ဖိုးဇီးရိုး) ဧပြီ ၂၀၊ ၂၀၁၃ အမေရိကန် သမတကြီး စာတွေအများကြီးတတ်လို့ လေးစားပါတယ်၊အမေရိကန် သမတကြီး စကားပြောကောင်းလို့ လေးစားပါတယ်၊ အမေရိကန် သမတကြီး အလုပ်တွေအရမ်းလုပ်လို့ လေးစားပါတယ်၊ အမေရိကန်သမတကြီး ငြိမ်းရေးရေးဆုတွေရလို့ လေးစားပါတယ်၊ အမေရိကန် သမတကြီး ကျုပ်တို့ရွာ ရောက်ခဲ့ရင် ကျုပ်မောင်းတဲ့ လှည်းကလေး စီးရဲပါစေ …….၊ လေးစားချင်လွန်းလို့ပါ ….. ။။။ No tags for this post.
ဇေမှိုင်း ဧပြီ ၁၉၊ ၂၀၁၃ ခဏခဏတမ်းတတဲ့ အမေ့ကောင်ကင်းမှာ ကျနော့်ခြေတောက်တွေဆွဲလို့ မရ ရုန်းလို့ မရ အိပ်မက်တွေထဲမှာ တစ္ဆေအိပ်မက်တွေမက်တယ်ထင်တယ် ခဏခဏ ခံစားရပါတယ်..။ ဟို လူကြီးကို အဝေး က လှမ်းလှမ်းချစ်ရတာအားမရလို့စကားပြောကြည့်တော့လဲ ကျနော့် အိပ်မက်တွေထဲမှာ ခြေတောက်တွေမှာလည်း မလှမ်းနိုင်ဘူး ငုဝါတွေလည်းမပွင့်ဘူး အဝေးရောက်သူများရေ ပိတောက်ကို အခုမှချစ်တယ်လို့ ပြောရင် ချစ်လိုက်ကြစမ်းပါ ဗျာ တို့ရယ်။ ကုန်သွားခဲ့ပြီလားမသိပါဘူး အခါး ခါး ခါး တွေကို ဖြတ်ခဲ့ရတဲ့ ကိစ္စလေ။ ဒီလိုပါပဲ အဲဒီလူကြီးတွေလဲ အိပ်မက်ခါးခါးတွေကို လွန်ဆန်လို့ မရ ခဏခဏ မက်နေကြမှာ မြင်ယောင်သေးတယ်။ ရဲဘော်ဆိုတဲ့ သူများရေ ကျနော့် အိပ်မက်မှာ...
ယုံတမ်းစကား ဘကျော်(မကွေး) ကျနော်အသက်တစ်ဝက်လောက် ပြန်ငယ်ချင်တယ်။ (ရီးစားသနာ ထားဘို့မဟုတ်ဘူး) လူငယ်တွေဆီကနေ ပညာပြန်သင်ချင်သေးတယ်။ လူငယ်တွေဟာ တိုးတက်တဲ့အမြင်ရှိတယ်။ တိုးတက်တဲ့ အကြားရှိတယ်။ တိုးတကိတဲ့ အသိရှိတယ်။ လူငယ်တွေဟာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုစိတ်ပြင်းတယ်။ ကျနော် … လူငယ်တွေကို ချစ်တယ်။ လူငယ်တွေကို ယုံကြည်တယ်။ လူငယ်တွေကို အားကိုးတယ်။ No tags for this post.
နှစ်သစ်ဆုတောင်း မာမာအေး၊ ဧပြီ ၁၇၊ ၂၀၁၃ တနှစ်ကူးပြီလေ ပုရစ်ဖူး တဝေေ၀နဲ့ ပိတောက်လေ လှိုင်လှိုင်နှောပါတဲ့ ချစ်သော မြေ။ ရွှေမြန်မာ သာစေရောရယ်နဲ့ နှိမ်ချွေကာ မေတ္တာပိုိ့လိုက်ရဲ့ အဖွဲ့ဖွဲ့အစည်းစည်း တစုတည်းညီညာ ငြိမ်းချမ်းစွာ တူယှဉ်တွဲ ပြည်သူထဲကို ၀င်လေ။ ဒို့အဖေ၊ ဒို့အမေ ဒို့အမျိုးသား၊ ဒို့ဘိုးဘွား ၊ အမွေအနှစ် မြန်မာပြေ။ တိုးစေ ပွားစေ အားသစ်မယ့် သားအနှစ် ဂုဏ် အညီပေ နေကြစေ တဆွေမှ တဆွေ ပြည်အလှဝေ လှပါစေ။ ...
သောင်းညွန့်အေးဆီ ရေးတဲ့စာ မိုးစဲနေ၊ ဧပြီ ၁၄၊ ၂၀၁၃ ထောင်မှာ ငါးဝါ ဘုန်းကြီး တ၀ါ ပြည်ပြေး ကိုးဝါ အချစ်ရေးမှာ တသံသရာ အ၀ိဇ္ဇာ ပစ္စယာ တဏှာ တဏှာ ပစ္စယာ ဝေဒနာ ဝေဒနာ ပစ္စယာ ဘာညာဘာညာ ကဲ..နှစ်သံသရာပဲ ဖြစ်ဖြစ် မင်းကို ချစ်တယ်.. သောင်းညွန့်အေးကို ချစ်တယ် သားကြီး ကြည်လင်အေးကို ချစ်တယ်.. ဟောဟို ပင်လယ်တကြောကို ပိုက်မျှောပြီး ပြန်ခဲ့မယ်။ ။ No tags for this post.
မယ်မွှေး – Dear Facebook https://t.co/PJUCBdN3Oi https://t.co/MP0dlfOQkw about 14 minutes ago ReplyRetweetFavorite